'जनतालाई सुसूचित गर्न जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ' | नयाँ शक्ति नेपाल
- २७ पुस २०७५
संयोजक, सामाजिक राजनीतिक परिचालन समिति
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको सामाजिक राजनीतिक परिचालन समितिले माघ ४ गते काठमाडौँमा खुला कार्यक्रम गर्दैछ । सरकारले खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितता, कार्यकारी अधिकार प्राप्त अधिकारीहरु, सांसद, विभागीय प्रमुखबाट भएका राज्यकोषको दोहन, पछिल्लो समय महिला हिंसा, हत्या, बलात्कारका बढिरहेका घटना र पहिचान, समावेशिता र संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा खुला कार्यक्रम गरिने समितिले जनाएको छ । विशेषतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले सामाजिक राजनीतिक परिचालन समितिका संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका हेडक्वार्टर सदस्य नवराज सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौँः
यतिखेर नयाँ शक्तिले खुला कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई संसदको पनि निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकमा एकप्रकारको पाँच वर्षको लागि सरकार बनेको छ । सरकारले सामाजिक, आर्थिक, जनजीविकाको पक्षमा, बेरोजगारी समस्या हल गर्ने पक्षमा लगायतका काममा एउटा अठोट साथ काम गरोस् भन्ने जनचाहना पनि छ । हामीले अहिले के भनिरहेका छौँ भने सरकारको जति पनि काम छन्, यी कामहरु न्यायसंगत हुनुपर्छ साथै सुशासन र सदाचारको आधारमा पनि जाँचिनुपर्छ । जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ । जनजिविकाको समस्यालाई हल गर्ने दिशातर्फ जानुपर्छ । विगतका जो सरकारहरु रहे, सरकार अस्थिर थियो त्यसको मौका छोपी कर्मचारीभित्र पनि विभिन्न विकृति भए । हामीले हिजो पनि सरकारलाई सचेत गराउँदै आयौँ र अहिले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यसलाई अन्त्य नगरे राजनीति र कर्मचारीतन्त्रभित्र शुद्धता आउँदैन । सुरक्षा अंगमा पनि शुद्धता आउँदैन र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिमा पनि आउँदैन । त्यसैले त्यस्तो भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ । अहिले राज्यकोषको दोहन झन् बढिरहेको छ । जनप्रतिनिधिको दोहोरो सुविधाको कुरा छ । राज्यकोषको रकम लिएर काम नहुँदा पनि विदेश भ्रमण जाने र विभिन्न सामग्री खरिदमा कमिसनको खेल हुने जस्ता कुकृत्यहरु जुन ढंगले चलेको छ, यतिका विकृति र विसंगतिका विरुद्ध हामीले बोल्नुपर्छ ।
विशेषतः सरकारले खरिद गरेको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता, कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकाहरु, सांसद, विभागीय प्रमुख लगायतबाट भएका राज्यकोषको दोहन, पछिल्लो समय बढिरहेका महिला हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाका विरुद्ध र पहिचान, समावेशिता र संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले देखिइरहेका असमझदारीका जुन विषय छन् यी सबै विषयलाई फोकस गरेर जनतासम्म हाम्रो आवाज पुर्‍याउन चाहेका हौँ ।
आन्दोलन समस्याको समाधान हो र ? सानो पार्टीको आन्दोलनको प्रभावकारिता के ?
हामी बोल्छौँ, सुन्ने करोडौँ जनता छन् । यो देशमा सबै भ्रष्ट छन् भन्ने त हाम्रो भनाइ होइन । यहाँ श्रमजीवी जनता छन् । कर्मचारी छन् । विभिन्न पेशा व्यवसायमा लाखौं जनता छन् । हामीले अगुवाइ गर्छौँ । हामी समाज सुधारका लागि आवाज दिइरहन्छौं । हाम्रो आवाज सबैले सुन्नुहुन्छ । हाम्रो आन्दोलनले दबाव सिर्जना गर्छ । राजनीतिमा अगुवाइ गर्ने कुरा मुख्य हो । राजनीतिमा गुणको कुरा प्रमुख हुन्छ । मात्राको कुरा प्रमुख हुँदैन । गुणले नेतृत्व गर्ने हो, भिडले नेतृत्व गर्दैन । हामीले तथ्यमा आधारित भएर सत्य कुरा उठाउँछौँ । हामी विरोधका लागि विरोधको राजनीति गर्दैनौँ । त्यसैले हामीले बोलेका तथ्यगत कुराको प्रभावकारिता झन् ज्यादा हुन्छ ।
अहिले पार्टीको राजनीतिक गतिविधि के कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
पहिलो कुरो, पार्टीको पाँच महिना पाँच काम र पाँच परिणाम कार्ययोजना कार्यान्वयनको थालनी भएको छ । यसमा पार्टी सदस्यहरु विस्तार गर्ने, कमिटी बिस्तार गर्ने, स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा तहसम्मै पुगेर भेला तथा सम्मेलन गरेर निर्वाचित कमिटी बनाउने, क्रमशः प्रदेश कमिटी पनि बनाउने र महाधिवेशनसम्मै जाने सांगठनिक काम छ ।
दोस्रो, अहिले देशमा देखा परेका समस्याहरु र एक वर्षमा सरकारको क्रियाकलाप मध्यनजर गर्दा देशमा खासगरी संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या छ, कर्मचारी नपुगेको, बजेट नपुगेको, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको सन्तुलन नमिलेको लगायतका समस्या उत्पन्न भएका छन् । प्रदेशलाई केन्द्रले अधिकार दिएन, आफैले केन्द्रीकरण गरेर मुठ्ठीमा राख्यो, प्रदेशको औचित्य माथि प्रश्न उठेका जटिलताहरु पनि छन्, यसलाई प्रष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुशासन र सदाचारको सन्दर्भमा जनतालाई जागरुक बनाउनुपर्नेछ । यो विषयलाई लिएर हामीले मध्यपहाडी लोकमार्ग जनसंवाद तथा जागरण यात्रा थालनी गर्दैछौं माघ १५ देखि फागुन १५ सम्म । पार्टीका केन्द्रीय संयोजकसहित पार्टी हेडक्वार्टर सदस्य, प्रदेश इन्चार्ज तथा संयोजकसहितको यो टीमले १७६५ किमी लामो जागरण यात्रा गर्छ ।
अन्य के विषयमा जागरण गराउनुपर्नेछ ?
भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन/सदाचार कायम गर्ने विषय, देशमा भइरहेका महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका विषय, संघीयताका कार्यान्वयनकै विषय हुन् । जो माथि नै भनिएका विषय हुन् । युवाहरुलाई लक्षित गरिएको छ । लाखौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । जो सँग विवेक, तागत र श्रम गर्ने क्षमता छ उनीहरु विदेशिने लाइनमा छन् । अब त्यो युवाको सीप र क्षमता देशभित्रै प्रयोग गर्ने, विदेश पलायन रोक्ने काम यो देशकै मुख्य काम हो । अब युवासँग हामी सिधा संवाद गर्नेछौँ । त्यतिमात्र होइन, हामीले काँग्रेस, कम्युनिष्ट वा अरु कुनै पार्टीमा आवद्ध भएका जोसुकै हुन् सबै प्रतिनिधिसँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गर्नेछौं । खुला अन्तरक्रियाको आह्वान गर्नेछौँ । हाम्रो जागरण यात्रा बहुआयामिक छ । देश र जनतालाई सचेत गराउनको लागि हामी जागरण अभियान गर्दैछौँ ।
पछिल्लो समय नयाँ शक्ति पार्टी समसामयिक राजनीतिक टिप्पणी गर्नमा र त्यस्तै कार्यक्रमहरुमा मात्रै सहभागी भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिलाई स्थापित गर्न, वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्न चाहिँ सकेन हो ?
ठुलो ढुंगा फोर्नु छ भने घनको एउटै चोटमा फोर्न सकिँदैन । त्यसकालागि प्रत्येक चोटको महत्व हुन्छ । हामीले वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गरिसकेका छौँ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरुसँग हाम्रो वार्ता, वहस, छलफल, सहकार्य पनि भइराखेको छ । हामीले विभिन्न छरिएर रहेका पार्टीहरुसँग, जो हिजो संसदमा पुग्न सकेनन्, साना दलहरुसँग पनि छलफल, वार्ता गरिरहेका छौं । अझ ठूलो वैकल्पिक शक्ति बनाउन हामी लागिरहेका छौं । एउटा समय आएपछि त्यसले देखिने गरी परिणाम दिन्छ ।
सर्वसाधारणमा नयाँ शक्तिप्रतिको आकर्षण वा त्यसमा सहभागिता अहिले कस्तो पाउनुभएको छ ?
हामी उत्साहित छौँ र खुसी पनि । नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि त्यसले प्रतिपक्षीको भूमिका सशक्त रुपमा खेल्न सकेको देखिएन । नेकपा सरकारमा भए पनि उसले जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन । बाहिर खबरदारी त नयाँ शक्तिले नै गरिरहेको छ । नयाँ शक्तिले नै सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ । जनताले प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा नयाँ शक्तिलाई लिन थालेका छन् । संसद र सडक दुबै मोर्चाबाट हामी यतिखेर जनताको आवाज बोलिरहेका पनि छौँ । यसप्रति हामीले सन्तोष नै मान्नुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा नयाँ शक्तिले समर्थन गर्दै आएको थियो । अहिले फेरि उहाँ इलाम पुगेर १६ औं अनशन बस्नुभएको छ । उहाँको समर्थनमा फेरि आन्दोलन गर्नुहुन्छ ?
सरकारले उहाँसँग जे गर्छु भनेर सहमति गरेको थियो त्यसमा सरकारले छलछाम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट भनाइ छ । जे प्रतिबद्धता तथा सहमति गरिएको हो त्यो पालना गर्नुपर्छ । कि त प्रतिबद्धता नै गर्नुभएन । सरकारलाई हामी प्रष्टसँग भन्न चाहन्छौं गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमति अक्षरस पालना होस् । डा. केसीले आह्वान गर्नुभएको विषय उहाँको व्यक्तिगत विषय मात्रै त होइन । यो त सबै नेपालीको विषय हो । चिकित्सा शिक्षामा आम नेपालीको छोराछोरीको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने त सबैको विषय हो नि । यो उहाँले व्यक्तिगत हितको लागि गरिरहनुभएको छैन । तर सरकारले छलछाम गरिरहेको छ । त्यसकारण उहाँको समर्थनमा हामी विगतजस्तै यसपल्ट पनि बोल्छौं ।